Dekeda Muqdisho oo lagu qabtay walxaha qarxa & qalab ciidan oo ku jiray konteenar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada booliska Soomaaliya iyo wasaaradda Amaniga Qaranka ayaa si wadajir ah u sheegay in dekedda Muqdisho lagu qabtay Konteenar ay ku jireen alaabooyin farabadan oo ay ka mid ahaayeen waxlxaha qarxa.
Ciidamada booliska dekadda Muqdisho ayaa gacanta ku dhigay kunteenarkaas oo ay ku jiraan waxyaabaha loo adeegsado qaraxyada iyo qalabka ay isticmaalaan ciidamada, iyadoo la qabtay xilli la isku dayay in qalabkaasi dekadda laga bixiyo.
Taliyaha saldhigga booliska dekadda Muqdisho Gaashaanle sare Maxamed Cabdi Eeboow oo la hadlay Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in xubin ka tirsan ciidanka ilaaalada canshuuraha uu qabtay kunteenarkan xilli ay ku guda jirtay kormeer ay ku smaeyneysay qalabka dekadda la soo geliyo iyo kuwa ka baxaya.
Wasiirka Amniga Qaranka ee xukuumadda Soomaaliya, Khaliif Axmed Ereg oo gaaray dekadda Muqdisho ayaa sheegay in dadaal ay sameeyeen ciidamada amniga lagu guuleystay in la qabto kunteenarka, isagoo intaa ku daray in guddi baaritaanno dheeri ah sameeya ay u saareen, si loo ogaado cidda dalka soo gelisay.
Sidoo kale saraakiisha hay’adda Nabad sugidda ayaa sheegay inay baaritaanno ku hayaan mas’uuliyadda shirkadda BIL oo ay u rarneyd qalabka la qabtay.
Kunteenarka ayaa waxaa ku jiray dhar, kabo milateri iyo qalab magned ah oo fududeeynaya waxyaabaha qarxa, waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan in markabka siday kunteenarkan uu ka yimid dalka Shiinaha, isla markaana dekadda Muqdisho ku soo xirtay 22-kii bishaan gacantana lagu dhigay qofkii uu u rarnaa badeecadaan.